Vermont Faa'idooyinka Shaqo la'aanta ee (Unemployment in Somali) | VTLawHelp.org
Vermont Faa'idooyinka Shaqo la'aanta ee (Unemployment in Somali)
Haddii aad lumisay shaqadaada ama saacadahaaga la jaray, waxaad malaha heli kartaa caawinta qaar. Waxaad codsan kartaa faa'idooyin xittaa haddii badroonigaaga uusan dhihin inuusan. Badrooniyada ma sameeyaan go'aamada ku saabsan faa'idooyinka shaqo la'aanta — gobolka wuxuu sameeyaa.
Miyaan u qalmaa faa'idooyinka shaqo la'aanta inta?
Waa inaad codsataa haddii:
lagaa saaray shaqada ama la iska kaa fasaxay
lagu siiyay fasaxa maqnaanshaha
la jaray saacadahaaga
Xasuuso, dhibaato malahan haddii badroonigaaga dhaho “aanan lagaa saarin” ama “aanan lagu siin fasaxa maqnaanshaha.” Degmada waxay go'aansaneysaa haddii sababta aad shaqada uga tagtay waxay ku qalansiisaa shaqo la'aan, ma ahan badroonigaaga.
Miyaan u qalmaa haddii aanan aheyn muwaadin Mareykan ah?
Guud ahaan, haddii aadan aheyn muwaadin Mareykan ah, waxaad u qalantaa faa'idooyinka shaqo la'aanta haddii aad haysatid ansixin sax ah ee shaqada Mareykanka hadeer oo waxaad haysatay mid markii aad shaqeyneysay. Mashruuca Sharciga Shaqada Qaranka waxay qabaan dulmarka guud oo waxa aan ka ognahay, iyo ma garaneyno, wax ku saabsan u qalmidaada faa'idooyinka shaqola'aanta ee waqtigaan.
Socdaalka aan sharciyeysneyn ma heli karaan faa'idooyinka shaqo la'aanta.
Maku nooshahay Vermont? Ma qabtaa su'aalo ku saabsan sharcigaaga socdaalka ama ogolaanshaha loogu shaqeynayo Mareykanka? La xiriir AALV ama Rugta Sharciga South Royalton.
Intee lacag ah ayaan filan karaa inaan helo isbuuc walba?
Caadi ahaan tirooyinka gobolka ee tirada faa'idadaada isbuuclaha adiga oo isticmaalayo qaabkaan. Faa'idada ugu badan waa $513/isbuucii.
Warbixintee ayaan uga baahannahay codsashada?
Fiiri ku qor hoosta boggaan websaydka Waaxda Shaqada Vermont. U diyaar ahow warbixin badan oo sida aad awoodid.
Garsooraha ka imaanayo Waaxda Shaqada ayaa kula soo xiriiri karo adiga iyo/ama badroonigaaga haddii:
warbixinta ka maqantahay, ama
adiga iyo badroonigaaga ku qilaafteen wax ku saabsan kuwa ka mid ah arimahaan.
Samey dadaalkaaga aad ku caawisid garsooraha inuu helo warbixinta ay u baahanyihiin. U sheeg haddii aadan geli karin kuwa ka mid ah warbixintaan.
Sidee ayaan u codsadaa?
Gudaha Vermont, sheegashooyin hore oo magdhowga shaqo la'aanta waa in lagu sameeyaa taleefon ahaan ama onleenka. Soo wac 1-877-214-3330 ama 1-888-807-7072.
Ka hor inta aadan la soo xiriirin Waaxda Shaqada si loo sameeyo sheegasho, la isu keeno warbixinta ka imaaneyso liiskooda warbixinta loo baahanyahay. Waaxda Shaqada ayaa qabaneyso wacitaano taleefono badan marka waxay qaadan kartaa waqti yar in lagu helo dhinaca taleefonka.
Ma inaan wax sameeyaa kadib markii aan u qalmo?
Joogtey xareynta sheegashadaada isbuuc walba oo inaysan kuu suurtogaleyn inaad shaqeysid ama saacadahaaga la jaray.
Sidee ayay midaan u saameyneysaa faa'idooyinkeyga, guriyeynta, iyo daryeelka caafimaad?
Haddii aad heshay caawinta bulshada sida 3SquaresVT (kaararka cuntada), caawinta shidaalka, Caawinta Guud, Reach-Up, ama SSI, waa inaad ku soo wargelisaa lacagta aad ka heshay shaqo la'aanta oo mid walba oo barnaamijyadaan ah. Guud ahaan waa inaad ku soo wargelisaa lacagta 10 maalmood dhexdooda oo markii aad bilowday helida shaqo la'aanta. Faa'idooyinkaaga kale way yaraan karaan ama joogsan karaan iyada oo aad heleysid shaqo la'aanta, waxay ku xirantahay inta aad ka heshid faa'idooyinka shaqo la'aanta.
Waa inaad sidoo kale ku soo wargelisaa mid walba oo barnaamijyadaan markii aadan markale u qalmin faa'idooyinka shaqo la'aanta, marka si aad u heshid 3SquaresVT, caawinta shidaalka, Caawinta Guud, Reach-Up, iyo SSI gadaal.
Haddii aad leedaay guriga la kabay, waa inaad ku soo wargelisaa faa'idooyinkaaga shaqo la'aanta milkiilaha gurigaaga (haddii aad ku nooshahay dhismo la kabay) ama maamulka gurigaaga (haddii aad heshid caawinta kirada sida foojarka Section 8). Saamigaaga kirada kor ayay aadi kartaa adiga oo helayo faa'idooyinka shaqo la'aanta. Waa inaad sidoo kale soo wargelisaa markii faa'idooyinkaaga shaqo la'aanta joogsato, si markaas saamiga kiradaada hoos u aado markale.
Waa inaan ku soo wargelinaa lacagtaada shaqo la'aanta Vermont Medicaid. Haddii aad heshid warqad dhaheyso in Medicaid ay isbadeleyso ama dhammaaneyso, fadlan nagala soo xiriir Xafiiska U doodaha Daryeelka Caafimaadka (HCA). Soo wac 1-800-917-7787 si aad ula hadashid u doodaha daryeelka caafimaad, ama buuxi Foomka Codsiga Caawinta. HCA waa adeeg bilaash u ah reer Vermonters.
Maxaa dhacayo haddii la ii diido?
Axaad haysataa 30 maalmood ka bilow taariiqda ku jirto ogeysiinta qoran ee racfaanka.
Waan kugu caawin karnaa go'aansashada haddii aad u baahantahay ama aadan u baahneyn inaad ka racfaan qaadatid diidmada shaqo la'aantaada. Buuxi foomkeena iyo dib ayaan kuu soo waceynaa. Warbixintaada waxay aadeysaa Adeegyada Sharciga Vermont, kaas oo u baaro codsyada caawinta oo labadaba Gargaarka Sharciga Vermont iyo Adeegyada Sharciga Vermont. Waxaad sidoo kale naga soo wici kartaa 1-800-889-2047.
Haddii aad ka racfaan qaadatid, hubi inaad ugu dirtid warqada Waaxda Shaqada 30 maalmood gudahood ee ka bilaabaneyso taariiqda diidmadaada ama "warqada go'aanka." Usheeg inaad rabtid inaad ka racfaan qaadatid. Waxaad sidoo kale ku soo diri kartaa racfaankaaga i-meel ahaan, fakis ama keentid, laakin si kastaba soo diritaankaaga, waa inay ahaataa 30 maalmood gduahood oo taariiqda warqada diidmada. Fiiri websaydka Waaxda Shaqada oo sharaxaadaha oo waxa lagu darayo warqadaada racfaanka. Hayso koobiga warqadaada.
Haddii aad badelkii isticmaali laheyd foomka racfaanka, waxaad isticmaali kartaa foomka Racfaanka Sheegtaha UI. Buuxi oo keydi koobiga nafsadaada.
Garsoorka Sharciga Maamulka (ALJ) ayaa dib u eegayo sheegashadaada iyo diidmada oo waxaad heleysaa taleefonka dhageysiga. Ka fiiri gadaasha Ogeysiintaada Dhageysiga ama websaydka Waaxda Shaqada wixi sharaxaadaha nidaamka racfaanada.